Mashiinka Goynta Dharka FIBC, Mashiinka Nadiifinta FIBC - VYT
Mashiinka Goynta Dharka FIBC
Mashiinka Goynta Suunka FIBC
Mashiinka Nadiifinta ee FIBC
Mashiinka Daabacida Qaabka Mashiinka Mashiinka
Bacda Safka Weelka
Mashiinka bac samaynta bac-leh tolmo wanaagsan
Dambiisha Automatic Jumbo Nadiifinta Mashiinka Hawo dhaqe ...
Jumbo Bag FIBC Mashiinka Mashiinka Goynta CSJ-2200
Jumbo Bag Belt webbing FIBC boorsada weyn loop Cuttin ...
FIBC PE Film Dhalo Auto Dhalo liner shaashadda Cu ...
Maanta, macaamiil badan ayaa ku qanacsan tayada iyo kalsoonida adeegyadeena iyo wax soo saarkeena. Waxaan horumarin doonaa adeegyadayada iyo kala duwanaanta wax soo saarka si aan u qancino macaamiisheena anagoo raacayna tikniyoolajiyadda cusub iyo baahiyaha suuqa.
Iyada oo taageero farsamo oo xoog leh, qalabka wax soo saarka horumarsan, oo ku saleysan hordhac joogto ah iyo nuugista tiknoolajiyadda horumarsan ee shisheeye, oo ay weheliso sannado badan oo khibrad farsamo soo saaris ah, waxaan soo saarnay qalabka wax soo saarka ee mashiinnada samaynta bacda jumbo.
Waxaan noqonay shirkad qadarinaysa xalka mashiinka bacda jumbo oo leh adeeg qaali ah. "Macaamiisha Adeegga, Horumar Wanaagsan" waa mabda 'ku xididaysan qalbi kasta oo dad ah. Iyadoo la raacayo mabda'a, waxaan ka helnaa aqoonsi ballaadhan macaamiisheena caalamiga ah.
Waxaan u dhoofineynaa wax soo saarkeenna in ka badan 50 dal iyo aagagga sida Bariga Dhexe, Ruushka, Koonfur-bari Aasiya iyo Afrika. Alaabtayada iyo adeegyadeenu waxay ku raaxaystaan ​​sumcad wanaagsan adduunka oo dhan.
Xuzhou VYT Makiinado iyo Teknolojiyadda Co., Ltd. waxaa looga dan leeyahay in lagu horumariyo laguna soo saaro dhammaan mashiinnada la xiriira FIBC, oo si gaar ah loogu talagalay loona farsameeyay qalabka caawinta iyo dhammeynta gadaal ee FIBC. Waxaan soo saareynay mashiinno loogu talagalay soosaarka FIBC sanado badan, Mashiinka VYT wuxuu adeeg siinayaa macaamiishiisa, xalalka suuqgeynta wanaagsan. Maanta, macaamiil badan oo ka badan 30 waddan oo idil ayaa ku qanacsan tayada iyo kalsoonida badeecadeenna iyo adeegyadeena.
FIBC goynta hal gabal
Jumbo boorsada gudaha
Xiiraha suunka FIBC
FIBC jar jaranjarada
Xiinka dharka goynta
Maanta, macaamiil badan oo adduunka oo idil ah, waxay ku qanacsan yihiin tayada iyo isku halaynta adeegyadeenna iyo wax soo saarkeenna.
Hordhaca bacda dahaarka weelka
Bacda safka weelka bacda dahaarka weelka, sidoo kale loo yaqaan weel qalalan b ...
Maxay yihiin astaamaha mashiinka gooyaa suunka FIBC?
Astaamaha: mashiinku wuxuu qaataa qalabka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka, calaamadaha Shiinaha iyo Ingiriiska, ...
Habka wax soo saarka ee mashiinka nadiifinta gudaha ee bacda weelka FIBC
Nooca korantada ayaa iska leh qaybta qalabka farsamada, qayb ahaan ...
Tikniyoolajiyadda jira ee mashiinka goynta bacda weelka ee weelka FIBC-da ayaa leh dhibaatooyinka soo socda
Mashiinka goynta FIBC sidoo kale waxaa loo yaqaan bacda weelka jilicsan, bacda tan, ...
1-1, warshad South, Zhangji Industrial Park, Degmada Tongshan, Xuzhou City